IMVELISO YEFANITSHALA YE MANGO WOOD KUNYE NE CONS - IFANITSHALA
Eyona Ifanitshala Imveliso yefanitshala ye Mango Wood kunye ne Cons
Imveliso yefanitshala ye Mango Wood kunye ne Cons
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwimveliso yefenitshala yeemango kunye neengozi kubandakanya ukuba yintoni, imbonakalo, iinkozo, iintlobo zefanitshala kunye neengcebiso zokugcina. Njengomninikhaya, kubalulekile ukuba ukhethe ukhuni oluhlala ixesha elide noluzinzileyo kulwakhiwo lwasekhaya, ifanitshala, okanye uyilo. Nangona kunjalo, lo ayingomsebenzi olula njengoko umntu ebenokucinga.
Ukukhetha iinkuni ezifanelekileyo kwiinjongo zakho zasekhaya kunokudideka njengoko zininzi iindlela onokukhetha kuzo, zonke zibonelela ngezibonelelo zazo.
Ukuba ungomnye wabo bantu abangakwaziyo ukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi indawo efanelekileyo ye-eco-friendly, efikelelekayo kunye nesezantsi yokulungiselela ukukhetha ikhaya lakho, uze kwindawo elungileyo.
Apha, siza kukwazisa ngomnye wezona zinto zibalaseleyo, ezizinzileyo, kunye nokusebenza ngokulula ngomthi emhlabeni, umthi wemango. Nantsi yonke into ekufuneka uyazi malunga nemithi yemango.
Yintoni iMango Wood?
Iipropathi zeMango Wood
Iinkonzo zeMango Ifenitshala
Umxhasi weMango wefanitshala
Iindidi zefanitshala ye Mango Wood
Ngaba umthi weMango ngumthi onzima?
Ngaba iMango Wood ilungile kwifenitshala?
Iingcebiso zoLondolozo lwefanitshala ye Mango
Umthi wemango waziwa kwihlabathi liphela ngenxa yesiqhamo sawo esithandwa kakhulu ngabantu. Into ongayaziyo malunga neentlobo zeTropiki zaseMzantsi Asia zeMangifera kukuba inokukhula ngempumelelo kwimveliso yeenkuni.
IMangi Indica (igama lenzululwazi lomthi wemango) ixhaphake kakhulu kwiindawo ze-Oceania kunye nemimandla yetropiki yaseAsia. Nangona kunjalo, imithi yemango inokufumaneka nakwezinye iindawo ezishushu, njengeBrazil, Mexico kunye ne-Australia.
Umthi wemango waziwa ukuba ukhula ube bubude obufikelela kwi-100ft. kwaye sangqa ukuya ku 4ft. Ngexa umthi wemango ukhuliselwa ikakhulu iziqhamo zawo ezimnandi, kuye kwaxelwa ukuba uyeka ukuvelisa iziqhamo emva kweminyaka esixhenxe.
Emva kokuba oku kwenzekile, umthi uyagawulwa; iinkuni ziyakhutshwa kwaye zisetyenziselwa ezinye iinjongo. Nangona umthi wemango ungadumanga kwimarike yehlabathi yokurhweba ngamaplanga, isasetyenziswa rhoqo eIndiya nakwezinye iindawo zehlabathi ukwenza ifanitshala enexabiso eliphantsi, izixhobo zomculo, iplanga, umgangatho, phakathi kwezinye izinto.
ukukhanya kweekhabhathi zecherry
Abanini bamakhaya basebenzisa imango ngomthi njengenye yeenkuni zefanitshala ezinje nge-Oak, Maple neMahogany. Kungenxa yokuba umthi wemango uthathwa njengomthi onzima, kwaye uneepateni ezingaguquguqukiyo ezenza ukuba zilungele ukwenza iimveliso zefanitshala ezinomtsalane.
Jonga le midiliya yenkulungwane ye-3 yetrowa esifubeni Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Inkangeleko -Umthi wemango ongasetyenziswanga waziwa ngokuba nomthi womthi okanye isambatho sangaphandle esimdaka mnyama. Kwelinye icala, umphezulu wangaphakathi womthi wemango unombala omdaka xa kuthelekiswa nokwaleka, ngelixa umthi weemango ogqityiweyo urhabaxa kwaye umbala omdaka ngegolide.
Iinkozo - Kwiimeko ezininzi, umthi wemango ubonakala unamabala amnyama kunye nemigca engaqhelekanga ehambelana nomphezulu wonke. Yimigca engaqhelekanga kunye namabala amnyama enza ingqolowa yomthi wemango. Nangona ezi ngqolowa zilungile, zikwaqhelekile phakathi kwezinye iinkuni ezilukhuni.
Ubungozi Ukuza kuthi ga ngoku, khange kubekho tyala lazo naziphi na iimpendulo eziqatha kumthi we mango, nangona oko kunokubangela ulusu olucekeceke phakathi kwabanye abantu.
Eco-friendly kwaye izinzile -Imithi yeemango ithathwa njengezinokuzinza kakhulu kwaye inobuhlobo phakathi koninzi lomthi okhuni okhoyo. Kungenxa yokuba uvunwa kuphela emva kokuba umthi wemango ugqibile ixesha lokuphila ukuvelisa iziqhamo zemango.
Ngesi sizathu, yimithi yemango esele ikhulile esecicini lokungazaliyo esetyenziselwa ukukhupha imango.
Oku kuthetha ukuba akukho mithi yemango esempilweni eyenzakalayo ngenxa yokukhutshwa kweenkuni. Kule minyaka, xa kukho isidingo esibi sokugcina okusingqongileyo, umthi wemango ngowona mthi ulungele ukwenziwa.
Ukusebenziseka kakuhle Nangona umthi wemango uthathwa njengomthi onzima, ukusebenza kwawo kusekude xa kuthelekiswa neminye imithi yesiqhelo onokuthi uhlangane nayo.
Ngomthi wemango, awudingi zixhobo zobuchwephesha ukuze uphathe. Kwakhona, umthi wemango ungathatha naziphi na izikhonkwane, izikrufu, okanye iglu ngaphandle kokuqhekeka.
Ukuqina okuphezulu Imithi yemango ikhutshwa kwimithi yemango esaziyo ukuba yomelele kwaye iyakhula kancinci. Amacwecwe afunyenwe kwimithi yemango omelele kwaye axinene, okwenza ukuba ibe yenye yezona mithi zomeleleyo phaya. Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba ukomelela kweenkuni zemango kunokuphuculwa kusetyenziswa isiphelo sokukhusela.
Ukugcinwa okuphantsi -Kwiimeko ezininzi, umthi wemango ufuna kuphela ukucocwa usebenzisa ilaphu elithambileyo nelifumileyo ukususa naziphi na amasuntswana othuli. Unokufaka enye i-wax ukukhusela ifanitshala yemithi yemango ekomeni.
Ixabiso elingabizi - Xa kuthelekiswa neminye imithi elukhuni, enje nge-Oak neMahogany, umthi wemango uyafikeleleka kwaye ubiza ixabiso eliphantsi. Umzekelo, uthenga i-intshi enye yemithi yeemango ngexabiso eliphantsi njenge- $ 5 ukuya kwi-15.
Imibala eyahlukeneyo kunye neepateni - Esinye sezizathu zokuba imithi yeemango ithandwa kangaka phakathi kwabanini bamakhaya ziindidi zayo zemibala.
Uthando olunzulu lucaphula kuye
Ngokusekwe ekugqityweni okanye ekutyalweni komthi wemango, unokufumana umbala ongwevu, opinki, omdaka, okanye otyheli kwifenitshala yakho. Kwakhona, kuxhomekeke kwibala leenkuni elisetyenziselwa ukugqiba, usenokufumana ingxelo emnyama yeenkuni.
Ukuxhathisa kwamanzi - Imithi yemango iyamelana kakhulu namanzi, iyenza ukuba ibe yeyona ndlela ifanelekileyo kwabo bafuna ukwakha indawo yokuhlala, ipatio kunye nezinye ifenitshala yangaphandle. Into elungileyo ngomthi wemango kukuba ungalwandisa uxhathiso lwawo lwamanzi ngokuwupolisha.
Uyilo Nangona umthi wemango uthathwa njengomthi onzima, usathambile kunemithi eqinileyo yesiqhelo efana neMahogany ne-Oak.
Imithi yemango inokumiswa ngokulula kwaye ikrolwe ngokweenkcukacha zomsebenzisi kunye nezinto azikhethayo.
Jonga le mango itafile yekofu yomthi e Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
zingaphi iintyatyambo kwisixa somtshato
Ukuhlaselwa ziinambuzane kunye nokungunda -Ngokungafaniyo neminye imithi elukhuni, imithi ye mango ihlala ihlaselwa ziintshulube zomthi kunye nezinye izinambuzane.
Oku kuthetha ukuba kufuneka uphathe ifanitshala yeemango yakho ngeekhemikhali ezifunekayo ukubonelela ngendawo yokukhusela, okanye ayizukuhlala ixesha elide njengoko ubuzimisele.
Awunamandla ngokwaneleyo kwifenitshala ethile -Ngokungafaniyo nemithi eqinileyo yesiqhelo, imithi yeemango ayikulungelanga ukusetyenziswa nefenitshala efuna iiplani ezinde, ezinje ngeebhedi kunye neewodrobhu. Kungenxa yokuba umthi wemango unokujijwa ngokulula.
Iyakwazi ukujika umbala -Ukuba ishiywe phantsi kwelanga ixesha elide, ifanitshala yeenkuni zemango inokuphela iphele okanye iqhekeke. Ukuba ifanitshala ibinombala omdaka, inokugqibela ngokufumana umbala omnyama kakhulu.
Iinkuni zemango zinokusetyenziselwa izinto zombini zangaphakathi nangaphandle zefanitshala. Le fenitshala ibandakanya;
• Iibhodi zetheyibhile.
• Amasango kunye nezakhelo zeefestile.
• Izixhobo zasekhitshini ezinje ngeebhodi zokucheba, iitreyi zokuphaka, nezitya.
• Ngeenjongo zokuphelisa.
• Ukulungiselela iinjongo zomgangatho.
• Iidesika nezitulo.
• Ukuphilisa isikhumba.
• Izixhobo zomculo ezinjengemigqomo kunye neekatala.
• Ifanitshala enkulu enjengekhabhathi zodonga, iiyunithi zokubonisa, kunye nekhabhathi zasekhitshini.
Ngaba iphepha-mvume lomtshato lithetha ukuba utshatile
Bona ngokwahlukileyo iintlobo zefenitshala yefenitshala Apha.
Ewe. Imithi yeMango ibonelela ngemithi yomthi onzima eqinile kwaye yomelele ngokubanzi iphezulu kakhulu kunaleyo yomthi othambileyo.
Nangona kunjalo, nangona ingumthi onzima, imithi yemango ifikelela ekuvuthweni emva kweminyaka eyi-8-12. Ngokuka Janka kobulukhuni, umthi wemango uxeliwe ukuba unamanqaku obunzima malunga ne-1100 ngeenyawo.
Ewe. Imithi yemango ilungele ukwenza ifanitshala. Ngenxa yokuxhathisa kwamanzi okuphezulu, inokusetyenziselwa zombini ifanitshala yangaphandle kunye negadi. Bona ezinye izinto eziphambili ozikhethileyo ulondolozo ifanitshala yangaphandle simahla Apha.
Kwakhona, ekubeni imango yemithi yomelele kwaye ayisindi, inokusetyenziselwa ngokufanelekileyo iifenitshala ezibanzi ezinje ngeetafile, iiyunithi zokubonisa, iikhabhathi zodonga, kunye nekhabhathi zasekhitshini.
Imithi yemango ihlala icingelwa njengomgangatho ophakamileyo kunompayini kunye nomthi womnga. Jonga imizekelo ngomthi womnga ifenitshala yangaphandle kweli phepha.
• Ngalo lonke ixesha kuphephe ukusebenzisa ilaphu elirhabaxa ukucoca ifanitshala yeemango.
• Kunqande ukusebenzisa izicoci ze ammonia njengoko zigqiba ukufunxa ukufuma okuvela kwifenitshala yeenkuni zemango.
• Qinisekisa ukuba ujikelezisa ifanitshala rhoqo ukuze ubonise zonke iinxalenye kwilanga elaneleyo nomoya.
• Kunqande ukubeka ifanitshala yeenkuni kufutshane neendawo zokutshisa umlilo kuba ubushushu bunokubangela ukuba iinkuni ziwe.
• Gquma yonke imikrwelo ngepeyinti efanayo kwangoko wakuba uzifumene.
Ifenitshala yeenkuni zemango iya isiba yinto edumileyo phakathi kwabanini bamakhaya, kwaye ngenxa yesizathu esivakalayo. Ukuba ufuna iinkuni ezifikelelekayo nezomelele kakhulu kwifenitshala yakho kunye nezinye iinjongo, umthi wemango wenza ukhetho olukhulu.
Ukufumana umxholo onxulumene noko ndwendwela iphepha lethu malunga iinkuni ezingcono kwiincopho zetafile Apha.
Izinto abantu abamele bathethe ngazo ngaphambi komtshato
oza kunxiba ntoni kwishower yasemva kwemini yomtshato
l iikhabhathi zekhitshi ezimilise